Amụma ndị ekweghị ekwe hapụrụ | Ndị nwoke mara mma
Alicia tomero | 27/05/2022 10:00 | Di na Nwunye na Mmekọahụ
Ọ bụ ihe na-enye nsogbu n'obi ma na-akpasu iwe ịchọpụta na e nwere ọtụtụ ihe ndabara nke a na-ahụ anya nke na-arụtụ aka na ya. onye òtù ọlụlụ gị ekwesịghị ntụkwasị obi Ikekwe ha bụ naanị echiche efu na ihe niile rụtụ aka na ndaba ndaba na-enweghị mkpughe ọzọ, ma mgbe e nwere ugbua ọtụtụ, ihe niile na-arụtụ aka na ekwesịghị ntụkwasị obi. anyị ga-ezute Kedu ụdị akara aka ndị ekweghị ekwe na-ahapụ mgbe ihe dị otú a mere.
Mmụba nke ikpe ekwesịghị ntụkwasị obi abawanyela, ma n'etiti ụdị ọ bụla nke di na nwunye ma ọ bụ alụmdi na nwunye. Ihe ndị na-akọwa ihe omume ndị a dị nnọọ iche, ma ọ bụ maka ihe gbasara akwara ozi, nsogbu omume, mkpụrụ ndụ ihe nketa, ndu, wdg. Na nke ọ bụla n'ime eziokwu ndị a, ọ bụ naanị ihe kwesịrị ịrịba ama kedu ihe nrịbama ndị na-ekweghị ekwe hapụrụ.
1 Netwọk mmekọrịta bụ isi mmalite
2 ụgha na-aga n'ihu
4 Ọpụpụ na-enweghị oge
5 Mgbe ọ lọtara n'ụlọ ọ na-asa ahụ.
6 N'uche, ị na-eche banyere ihe ọzọ mgbe niile
7 O yiri ka ndị enyi ya na-ezochi ihe
8 Kedu ihe na-eme na mmekọahụ?
Netwọk mmekọrịta bụ isi mmalite
Ọtụtụ ekwesịghị ntụkwasị obi na-amalite na ịntanetị. Eziokwu nke iso ndị mmadụ na-amaghị ama na-akpakọrịta na ịkọwa ihe omimi mmadụ na-ebu n'azụ profaịlụ ahụ, na-eme. mụbaa ọchịchọ ịmata ihe, wee bịa kọntaktị na n'ikpeazụ a ụbọchị.
Izute ndị ọhụrụ bụ usoro nke ụbọchị ekele maka ìgwè mmadụ webụsaịtị na ngwa ị ga-achụ nwoke n'ịntanetị. Ekwentị mkpanaaka na-abụkarị ụzọ bụ isi na mgbe onye gị na ya na-emekọ ihe na-achọ izobe ma ọ bụ gbochie ohere ha, ọ bụ ebe ahụ ka otu n'ime ihe kpatara ihe omume nwere ike isi bata.
Àgwà ndị ha nwere ike na-eche banyere otú ha si eji ekwentị na mbụ eme ihe ga-egosi na ha nwere ike ịbụ iso ndị ọzọ na-akpakọrịta. Iji ngwaọrụ a na-aga n'ihu ga-enye ọtụtụ ihe ikwu maka ya, ebe ọ bụ na ọ ga-aṅa ntị mgbe niile na ọkwa. ọbụna mgbe niile ị ga-enwe njikwa zuru oke maka ịnweta gị nke mere na ndị ọzọ enweghị ike ịnweta kọntaktị ma ọ bụ gụọ ọdịnaya ya.
ụgha na-aga n'ihu
Nlekọta, nlekọta ma ọ bụ eziokwu ọ bụla nwere ihe ngọpụ nwere ike ịbụ ikpe na-enweghị mkpa. Eziokwu bụ mgbe usoro ihe omume a ha na-aga n'ihu ma ị malite ijikọ ntụpọ na ị na-achọpụta na ọtụtụ oge ha anaghị agbakọta.
Ikekwe Ka nkwurịta okwu malite na na onye nke ọzọ na-agọnahụ eziokwu na ụta na onye òtù ọlụlụ maka ịbụ nnọọ ịchịkwa, paranoid na ọbụna ibu ekworo. N'ozuzu, ọ bụrụ na ejidere onye ekwesịghị ntụkwasị obi, azịza ya ga-adị njikere mgbe niile; ọ ga-emeghachi omume ọjọọ, were iwe, iwe ga-ewekwa ya nke ukwuu.
Ọ na-eme mgbanwe na-atụghị anya ya na mgbanwe oyiyi, ọ na-eyi ntutu ya nke ọma na ọbụna na-esi ísì ụtọ mgbe a na-ejighị ya mee ihe na mbụ, nwere ike inye obere ihe ngosi na ihe na-eme.
Ma eleghị anya ọ bụ ntakịrị mgbanwe n'ihi na ị na-enwe a mgbanwe nke existential nsogbu na chọrọ reinvent onwe ya. Naanị gbalịa ịhụ mgbe ihe ndị a na-adaba na ihe mere n'ụbọchị n'ihi na ọ ga-abụ na ọ nọwo na ụbọchị.
Ọpụpụ na-enweghị oge
Ụzọ ọpụpụ ahụ jọgburu onwe ya na nnukwu ngọpụ ha na-eme ka ndị mmadụ na-ekwu okwu mgbe niile. Mgbe enwere usoro ihe omume na-anaghị eme kwa mgbe, ọ bụlarị ihe nwere ajụjụ ya. Ọpụpụ gị na-atụghị anya ya ha na-enwe ihe ngọpụ mgbe niile, na-ekwu na ọ ghaghị iburu ihe dị mkpa, iji rụọ ọrụ na mgbe nile na-enye azịza ndị na-edochaghị anya.
Ọzọkwa, mgbe ịchọrọ ịbanye n'ime okwu ahụ na-enweta nchebe wee sị, ọ bụ na enweghị m ike ime ihe ọ bụla ọzọ? Enweghị m ike ịpụ apụ? N'okwu ndị a ị nwere ike were ohere kwuo nke ahụ ị ga-eso ya mee ihe n'ebe dị nso, ebe a ị ga-ahụ otú o si eme. Ọ bụrụ na ọ na-afụ ya ụfụ ma ọ bụ na-afụ ya, ikekwe ọ bụ n’ihi na ọ ga-eme ihe ọ na-achọghị ka ị mara.
Mgbe ọ lọtara n'ụlọ ọ na-asa ahụ.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị. Ọtụtụ ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi mgbe ha na onye ha hụrụ n'anya na-akpa na-alọta ha na-anwa ịsa ahụ iji hichapụ akara ọ bụla nke ahụ nwere ike ịta ha ụta. Ọ bụrụ na ị na-enyo enyo n'ezie, chọọ ihe ndị ọzọ nwere ike ịfọdụ, dị ka uwe ya. Ị nwere ike ịhụ ihe atụ nke ụfọdụ senti na ọbụna obere ntụpọ na-atụghị anya ya.
N'uche, ị na-eche banyere ihe ọzọ mgbe niile
Ọ ka mma ịghara ịwụ elu na nkwubi okwu, mana ihe dị ya n'isi na nke ahụ na-eme ka o nwee isi ya n'ebe ọzọ. Nke a abụghị ezigbo ihe ịrịba ama ma ọ bụrụ na ọ gwaghị gị ihe ọ na-eche ma ị na-ele ya anya dị ka à ga-asị na ọ bụ ya Etufuru m n'ụdị echiche dị omimi.
O yiri ka ndị enyi ya na-ezochi ihe
mgbe ị nọ n'ìgwè enwekwaghị ịma jijiji ahụ dị adị. Mgbe ụfọdụ, ọnọdụ ahụ na-adịwanye njọ, a na-emepụta ịgbachi nkịtị na-enyo enyo. Ọ dị ka ị nweghị ike ịnọ n'oge ahụ n'ihi na ọ na-abịa dị ka iwe. N'okwu a, ọ nweghị ihe ga-eme, ị nweghị ike ịmepụta ọnọdụ wee bụrụ paranoid, mana ị ga-eme ka ọ bụrụ na ọ nweghị ihe merenụ.
Kedu ihe na-eme na mmekọahụ?
Ikekwe n'oge a enwere echiche abụọ dị iche iche. Omume ndị a na-adịkarị iche, mana ihe na-emekarị bụ nke ahụ mmekọahụ na-ebelata n'ọnụọgụ ugboro. Ndị ọzọ ọ bụghị nanị na-eche na mmekọahụ na-ebelata, ma n'ụzọ ọ na-etolite. Gịnị nwere ike ime? Na onye ahụ nwere nchegbu na mmasị ndị ọzọ nke ha na-enwebughị na nwere ike igosi mmụba na ya libido ma ọ bụ ọdịda dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Mụ nwoke Stylish » Dabara » Di na Nwunye na Mmekọahụ » Amụma ndị ekweghị ekwe hapụrụ